'वैधानिक एमाले केपी ओलीसँग मात्रै छ, अर्को एमाले कतै छैन' | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal 'वैधानिक एमाले केपी ओलीसँग मात्रै छ, अर्को एमाले कतै छैन' | एक्सप्रेस | GNN Nepal
आत्मकेन्द्रित सोच नराखेर, परिवार केन्द्रित नभएर देश र जनताप्रति केन्द्रित भइदिनुहोस् भन्ने प्रचण्डलाई मेरो आग्रह हो : लालबाबु पण्डित
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यतिबेलाको (नेकपा) का अधिकांश नेताहरु आपसमा विभाजित भए । यहाँ पहिलेदेखि नै तटस्थ रहँदै आउनुभएको छ । नेकपा हुँदै हाल नेकपा एमालेभित्र प्रवेश गरेको यो राजनीतिक विवादलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपाको आन्तरिक विवाद, सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात अहिले नेकपा एमालेले सरकार सञ्चालन गरिरहेको स्थिति छ । अर्कोतिर विगतमा पार्टी एकता भएको थियो । अहिले पुरानो ठाउँमा फर्केको कारणले गर्दा पार्टी पनि पुन: व्यवस्थापनको काम चलिरहेको छ । केही असन्तुष्टिहरु देखिएका छन् । तर मैले पहिले नै भनेको थिए पार्टीभित्रको यो विवाद एक महिनाभित्र शान्त हुने स्थिति हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइसकेपछि नेकपा एमालेभित्र देखिएको विवाद अब अन्तिम अवस्थामा छ । नेकपा एमालेमा देखिएको समस्या अबको १५ दिनभित्रमा समाधान भएर जान्छ । त्यसपछि नेकपा एमाले एकढिक्का भएर अगाडि बढ्छ ।
यहाँले नेकपा एमालेभित्रको विवाद १५ दिनभित्रमा समाधान हुन्छ भनिरहँदा केपी ओली समूह आफ्नै तरिकाबाट अघि बढिरहेको छ । वरिष्ठ नेता माधव-झलनाथ समूह पनि आफ्नै तरिकाबाट अघि बढिरहेको छ । पार्टी विवादलाई लिएर आपसमा मुठभेडको स्थिति देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा विवाद कसरी समाधान हुन्छ ?
वैधानिक रुपमा मूल पार्टी केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमाले नै हो । अर्को नेकपा एमाले छैन । तर नेकपा एमालेभित्रको केही असन्तुष्टि छ । त्यो संख्यात्मक हो तर कतिपयले त्यसलाई समूगत पनि भनेका छन् । अहिले कतिपय साथीहरु आधिकारिक पार्टी जो मूल पार्टी छ त्यतैतिर आइसकेको स्थिति छ ।
म पहिले पनि पार्टी एकता बनाउन लागिरहेको थिए । अहिले पनि मैले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलिरहेको छु । हामी अहिले पुर्नव्यवस्थीकरणको झण्डै झण्डै अन्तिम चरणमा पुग्न लागेका छौं । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठकले पार्टीभन्दा बाहिर रहेका अन्य साथीहरुलाई आव्हान गरेर पार्टीको महाधिवेशनमा जाने स्थिति बनेको छ । अहिले बाहिर रहेका साथीहरु यही पार्टीमै आउनुहुन्छ र पार्टी थप सुदृढ भएर अगाडि बढ्छ ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले नै वैधानिक हो विभाजित समूह यतै आउनुको विकल्प छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
अब आइसक्नुभएको छ । आउनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले ग्यारेन्टीका साथ भन्छु । म अझै ढुक्कका साथ भन्छु मूल पार्टी छोडेर कोही पनि जाँदैन । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८ सुरु हुने दिनसम्म नेकपा एमालेमा सबै साथीहरुसहित थप उत्साह थपेर अगाडि बढछौं ।
त्यसपछिको यात्रा के छ ?
त्यसपछि हामी पार्टी महाधिवेशनमा जान्छौं । सरकारलाई स्थिर बनाउने । अहिले त सरकार बहुमतको नै छ । कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि नै नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहन्छ । नेकपा एमालेले अन्य पार्टीहरुलाई पनि समावेश गराएर सरकारको पूरा अवधि सञ्चालन गर्छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भइसकेपछि नेपाली राजनीतिमा दुई ठूला दृश्यहरु देखा परेका छन् । एउटा समूह सत्ता टिकाउने खेलमा अघि बढिरहेको छ । अर्को समूह जसरी हुन्छ नयाँ सरकार पुनर्गठन गर्ने अवस्थामा छ । नेतृत्वले खाली सत्ताकै लागि मात्र अघि बढ्ने, जनतालाई सर्वोपरि नठान्ने हो भने राजनीति गर्नुको के अर्थ ?
राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ । हामीले स्थायित्व दिन खोजिरहेकै छौं । अर्कोतिर अस्थिर नहुने पदीय ठाउँमा पुग्नको निम्ति भएका नाजायज प्रयासहरु समाप्त भएर जान्छन् । कहिलेकाँही आकाशमा गड्याङगुडुङ आएको देखिन्छ । तर त्यो गड्याङगुडुङ पृथ्वीसम्म आइपुग्दैन । त्यसको केही अंश मात्रै पृथ्वीमा आइपुग्छ । अब यो गड्याङगुडुङ इतिहास बन्दैछ ।
अन्य देश र हाम्रो देशको नेतृत्वमा एउटै कुरा फरक छ । अन्य देशको नेतृत्वहरु काममा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, परिणाममा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । हाम्रो देशको नेतृत्व पद लोलुपतामा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने, जनताका समस्याहरु समाधान नगर्ने भयो । यस्तो नेतृत्वलाई जनताले टिकाइराख्न आवश्यक छ र ?
नेपाल मात्र होइन अल्पविकसित मुलुकहरुमा यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ । हाम्रो लोकतन्त्र पनि परिपक्क भइसकेको छैन । हामी परिपक्ताको दिशातर्फ हिँडिरहेका छौं । दुनियाँका विकसित मुलुकहरु रुस, अमेरिकाको इतिहास हेर्नुभयो भने पीडादायी छ । त्यसकारण अहिले मात्रै हेरेर हुँदैन । लामो हण्डर र ठक्कर खाइसकेपछि मात्र राजनीतिक स्थायित्व आउँछ । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाँही अस्थिरताको खोजी गर्ने, परिवर्तनलाई पनि स्थायित्व नदिने अवस्था आउँछ । एउटा संस्कारको विकास भइसकेको र प्रणालीको पनि विकास भइसकेको हुन्छ । हाम्रोमा संस्कार र प्रणाली दुवैको विकास हुन बाँकी नै छ ।
हाम्रोमा छिटोछिटो परिवर्तन खोजी गर्ने स्थिति छ । परिवर्तनलाई स्थायित्व दिनका लागि कन्जुस्याँइ गर्ने देखिएको छ । यसले नै अस्थिरता निम्त्याएको हो । अब मुलुक राजनीतिक स्थायित्वसहित विकास निर्माणको दिशामा अघि बढ्छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भइसकेपछि संघीय संसदमा बसेका बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुनुभएन । प्रधानमन्त्रीको यो हठीले के संकेत गर्छ ? उहाँलाई अझैसम्म पनि संसद मन परेको छैन ?
बैठक विधिका निम्ति बसेको छ । अब चाहिँ छलफलको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री समयमै संसद भवनमा पुग्नुहुन्छ । बैठक सुरु नभएपछि उहाँका अन्य कामहरु पनि हुने भएका कारण बिदा मागेर उहाँ जानुहुन्छ । उहाँले संसद छल्ने कुरा छैन । उहाँले संसदको सामना गर्नुहुन्छ । लोकतन्त्रमा जनताको सर्वोच्च थलोबाट भागेर कतै पुगिदैन । संविधानले उहाँलाई भाग्ने अधिकार दिएको छैन ।
मानौं युवा राजनीतिज्ञको हैसियतले मैले यहाँलाई यो ठाउँको समयावधि तपाईका लागि सकियो । अब यो ठाउँ हाम्रो हो, हामीलाई सुम्पिनुहोस् । तपाईहरु सल्लाहकारको भूमिकामा बस्नुहोस् भनेर आग्रह गरे भने तपाईको जवाफ के हुन्छ ?
म सिधै भन्छु जनताको जनप्रतिनिधि टिका लगाएर आएको होइन । प्रतिस्पर्धा गरेर आएको हो । बहुदलीय प्रणालीमा पार्टीभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गरेर स्थान लिनुहोस् । जनप्रतिनिधिमुलक संस्थामा पनि प्रतिस्पर्धा गरेरै आउनुहोस् । टिके प्रथाको विरोध गर्नुहोस् । टिके प्रथाले योग्यता र क्षमता प्रदर्शन हुँदैन । यो प्रथाले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यसकारणले युवाहरुले व्यापक रुपमा अन्य कामहरु पनि गर्नुहोस् देशको पक्षमा पनि काम गर्नुहोस् ।
राम्रो खेलाडी हुनुहोस्, राम्रो उद्योगी बन्नुहोस् र राम्रो जनप्रतिनिधि पनि बन्नुहोस् । प्रतिस्पर्धा गरेर आउन नसक्ने भए मलाई पदमा भेटी चढाइदेउ भन्ने अवस्था आउँछ । यो अवस्था आउन दिनुहुँदैन । सित्तैमा पाएको सामानको मूल्य र उपयोगिता बुझिँदैन । त्यसको आवश्यकता पनि बुझिन्न । असल युवाहरु राजनीतिक क्षेत्रभित्र पनि आउनुहोस् । तर दुख गर्नुपर्छ भनेर नआउनुहोस् । दुखका साथ म समाज परिवर्तन गरेरै छाड्छु भन्ने दृढ संकल्पका साथ आउनुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ । देशले युवाहरु खोजिरहेको छ ।
तपाईले सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष सुरु गर्नुभएको थियो । त्यो सिंहदरबार अहिले बदलिएको छ ? तपाईले यो यात्रामा सफलता हाँसिल गर्नुभयो ?
मैले जति सके सिंहदरबार बदल्ने प्रयास गरे । त्यो बदलिएको छ तर पूर्ण भएको छैन । अझै मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ । मैले मात्रै मेहनत गरेर पुग्दैन धेरैले मेहनत गर्नुपर्छ ।
वर्तमान अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
जनताको जनमतलाई स्वीकार गर्नुहोस्, आत्मकेन्द्रित सोचलाई बदल्नुहोस् । शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढिरहेको देशमा फेरि पनि विद्रोह गर्छु र लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिलाई समाप्त पारेर हिँड्छु भन्ने सोच आउँछ भने त्यो सोचलाई रच्छ्यानमा पुर्याइदिनुहोस् । जनता, देश नै सर्वोपरि हो र मलाई जनताले जुन ठाउँमा स्थान दिएको छ त्यो ठाउँबाट जनताको सेवामा खटिनुहोस् । आत्मकेन्द्रित सोच नराखेर, परिवार केन्द्रित नभएर देश र जनताप्रति केन्द्रित भइदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।
फागुन १७ गते, २०७७
भारतीय विदेशमन्त्रीको भनाइप्रति काङग्रेसको आपत्ति, ‘बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन्’
साउन २५ गते, २०७७
माघ १० गते, २०७७